SKU: 37758-47-7 Sokajy: Drug Smart
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ny atidoha kisoa (37758-47-7), ny anarana fohy dia mety GM1, nesorina avy amin'ny atidohan'ny kisoa ary izy dia mpikambana ao amin'ny andiam-ganglioside ganglio izay ahitana sirikan'ny sialika iray.
GMl dia afaka mampiroborobo ny fanarenana ny asan'ny neurologique taorian'ny fahasimbana ny rafi-pitabatabana an-kolaka misy ny antony marobe, mampiroborobo ny neuroplasticity. Ny fanandramana dia mampiseho ny aretin'ny VIH ao amin'ny atidoha, ny atidoha mampihoron-koditra amin'ny famerenana ny selan'ny nerve ao amin'ny ratra rindran-damosina dia misy fiantraikany amin'ny fiarovana ary mampiroborobo ny anjara asan'ny sela.
Ny fizotry ny tohatra roa voalohany dia nampiseho fa mety hampihenana ny neurotoxicity (OIN) ny oxaliplatin. Saingy tsy nohamarinin'ny fitsarana III. Ilaina ny fizarana III fitsarana mba hanadihadiana ny vokatra sy ny fiarovana ny monosialotetrahexosylganglioside Sodium Injection noho ny fisorohana ny OIN amin'ny homamiadan'ny tsinay.
Product Name Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) kisoa
Anarana simika Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (atidoha porcine)
molekiolan'ny Formula C73H134N4O31
molekiolan'ny Wvalo 1563.85
Ny antsasaky ny biolojia /
Color Vovon-tany tsy misy fotony
Solubility chloroform / methanol (9: 1): 10 mg / mL, mazava, tsy misy loko
Application Ireo mpanokana voatokana ho an'ny tovoka kôlera izay manangona ao amin'ny atidoha amin'ny lipidose amin'ny zaza vao teraka.
Fitaovana fitsapana Ao amin'ny Quality Quality Home
Character Vola fotsy na fotsy; kely tsizarizary, tsy manina; lena. Ity vokatra ity dia tsy azo velezina amin'ny rano, mora levona amin'ny metanol, izay tsy voapoizina amin'ny ethanôla tsy misy rano.
Fanehoan-kevitra mamolavolan'ny loko 1 Raiso ny vahaolana 0.2ml amin'ny fikarohana, ampidiro rano 2ml, ary ampio ny hydroquinone hydroquinone 0.2g, ampio ny rano 10ml voavolavola, ampio ranom-boankazo bitro 90ml, add 0.1mol / L Copper solution sulphate 0.25ml, Cooler Conservation) 2ml, fanasan-drano fanadiovana rano ho an'ny 15 minitra, vahaolana manga sy volomparasy, miaraka amin'ny alko 5ml Vibration extraction, ny tsy fisian'ny alikaola manga.
Fanehoan-kevitra mamolavolan'ny loko 2 Raiso ity vokatra ity momba ny 20mg, ampiasao asidra acetic glacial 1ml, ny fanamainana rano fandroana tanteraka, manampy telo ranoka ranoka ranon-drilon'ny ranoka 1 telo, ao anaty rano mafana amin'ny alàlan'ny fantsom-pidiovana dia ampidino tsikelikely ny asidra solifara 1ml, , dia tokony ho mainty ny fifandraisana roa-liquid
Ny sira Sodium Ny famantarana ny fihetseham-pon'ny sira ao amin'io vokatra io (famoahana 2015 efatra famoahana 0301 an'ny Pharmacopoeia).
Chromatographie (LC) Ao amin'ny toetoetry ny chromatografika voarakitra an-tsoratra ny votoatiny dia tokony hifanaraka amin'ny fotoana voatazona ny haavon'ny haavon'ny lozam-pifaneraserana ny fotoana hijanonana amin'ny tampon'ny loha-hevitra.
Infrared spectroscopy Ny sarintany fananganana hazavana hafahafa amin'ity vokatra ity dia tokony hifanaraka amin'ny sarintany amin'ny vokatra fanaraha-maso (famoahana 2015 efatra famoahana 0402 an'ny Pharmacopoeia).
Fahamalinana sy loko vahaolana Tokony hazavaina tsy misy loko; Raha rahona izy io, dia tsy ho lasa maina noho ny marika mahazatra ny tsy fahampian-tsakafo No. 1th; Raha toa ka tsy tokony ho lalina noho ny vahaolana jono ny 1th Yellow.
Famaritana ambony Ny vahaolana vita dia tokony ho mazava sy mangarahara rehefa avy ny hafanana ambony, tsy misy hazavana ronono, tsy misy fisarahana
Sensitizing factor (proteinina samihafa) ≤50000
Total sialika asidra Araka ny famaritana ny vokatra maina dia tokony ho 19.0 ~ 21.0%
Fitaovana mifandraika amin'izany Asidra sialika ≤0.3% GD3, GD1a, ny fahalotoana tsy fantatra dia ≤ 0.5%; impure ary ≤2.0%
Loto matevina ambony ≤0.5%
Solvents Residual Methanol ≤ 0.1%; acetone ≤ 0.3%; Trichloromethane ≤0.003%
Fandoroana rivotra ≤5.0%
Heavy metaly ≤20ppm
Toxicity tsy mety Fitsipika ankatoavina
Antihypertensive substances Tokony hifanaraka amin'ny fitsipika (fitantanana marobe)
Pyrogen Tokony hifanaraka amin'ny fitsipika (fitantanana marobe)
Habaka Mikrobia Ny isa feno bakteria aerôbika dia tokony <100cfu / g, ary ny isan'ny isan'ny bobaka sy ny diera dia tokony <50cfu / g
voafaritra tsara ≥98.0%
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (37758-47-7), ny anarana fohy dia mety GM1, nesorina avy amin'ny atidohan'ny kisoa ary izy dia mpikambana ao amin'ny andiam-ganglioside ganglio izay ahitana sirikan'ny sialika iray.
GM1 dia afaka mampiroborobo ny fanarenana ny asan'ny neurologique taorian'ny fahasimbana ny rafi-pitabatabana an-kolaka amin'ny karazana antony, mampiroborobo ny neuroplasticity. Ny fanandramana dia maneho GM1 ny fahasimban'ny atidoha ao amin'ny atidoha, ny atidoha mahatsiravina amin'ny famerenana ny selan'ny nerve ao amin'ny ratra rindran-damosina dia misy fiantraikany amin'ny fiarovana ary mampiroborobo ny anjara asan'ny sela.
MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) powder (37758-47-7) Ny fomba fiasa?
GM1 (monosialotetrahexosylganglioside) ny "prototype" ganglioside, dia mpikambana ao amin'ny andian-ganglioside ganglio izay misy sirikan'ny sialika iray. GM1 dia manana toetra manan-danja ara-pahasalamana ary misy fiantraikany amin'ny plastika sy ny plastika, ary ny famoahana ny neurotrophins ao amin'ny atidoha. Ankoatra ny asany ao amin'ny aty amin'ny atidoha, GM1 dia miompana amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny toxine kôlera sy enterotoxin E. coli hafana (Dia ny traikefa amin'ny mpanjifa).
soa of MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) powder (37758-47-7)
Ganglioside GM1 dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana ganglioside izay nampiasaina tany amin'ny firenena maro ary heverina ho fomba fitsaboana hafa ho an'ny fisorohana aretina maro avy amin'ny neurolojia, ka tafiditra ao anatin'izany ny ratra amam-borona. Ny vokatra ara-pahasalaman'ny GM1 dia voaporofo amin'ny neona sy ny olon-dehibe manaraka ny fahasimban'ny atidoha.
soso-kevitra MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) poids (37758-47-7) Dosage
Ny fanafody dia napetraka amin'ny doka 20-40 mg isan'andro amin'ny fitsaboana amin'ny intravenous na tsimokaretina tsikelikely araka ny torohevitry ny dokotera. Ao anatin'ny vanim-potoana maizim-potoana miova: Ny fampiasana zava-mahadomelina dia ampiasaina amin'ny doka 100 mg isan'andro amin'ny fisidinan'ny intravenous; Taorian'ny herinandro 2-3, amin'ny ankapobeny dia mitazona ny habetsaky ny 20-40 mg isan'andro mandritra ny herinandro enina, ny dosie voalohany amin'ny 500-1000 mg dia entina amin'ny fitsaboana voan'ny aretina Parkinson; Hatramin'ny andro faharoa, dia nampiasaina tamin'ny doka ny 200 mg isan'andro ny fanafody fanindroany, fampidiran-tsiranoka na tsiranoka amin'ny fitsaboana mandritra ny herinandro 18. Raha ny fanafody entina amin'ny tsiranoka na tsiranoka dia tokony hapetraka sy hivoahana ao anaty rano ho an'ny tsimok'aretina izy mandra-pahatongan'ny fihenan'ny 10 mg / ml amin'ny; raha vantany vao misotro ronono ny fitsaboana, dia navotsotra ny zava-mahadomelina ary navotsotra tao amin'ny 0.9% glucose injection.
Side effects of MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) poids (37758-47-7)
Ny voka-dratsin'ny GM1 dia ny fihetsika mahery fihetsika taorian'ny fampiasana.